Mogadishu Journal » 2018 » February » 9
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Amb, Ahmed Isse Awad ayaa magaalada New-york ee dalka Mareykanka kula kulamay u qaabilsanayaasha QM wadamada Chine, Russia & Kuwait oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirada iskaashi ee ka dhexeeya dalka...
Mogadishu – IOM, the UN Migration Agency, in partnership with the Immigration and Naturalization Directorate of Somalia (IND), hosted a three-month long capacity building exercise, training 71 migration officials to enhance client service delivery and operations at the Mogadishu...
President Uhuru Kenyatta on Thursday praised Kenya Defence Force’s strategies in fighting Al-Shabaab, saying they had borne fruit because the terror gang had failed to carry out any major attack in the country in the last two years. He said the troops in Somalia and those...
Mjournal :-Magaalada Kismaayo waxaa maalintii labaad ku xiran saxafi ay shaley xireen ciidamada amniga ee maamulka Jubbaland. Saxafigan oo latgu magacaaco Saabir Cabdulqaadir Warsame, ayaa la xiray xilli uu waday shaqo uu ku duubayay sida la sheegay munaasabad lagu xusayay...
Mjournal :-Maxkamada Caalamiga ah ee Danbiyada oo xarunteedu tahay magaalada Hague ee dalka Holland ayaa baaritaan ku bilowday dacwad laga gudbiyey Madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte. Dacwadan ayaa la xariirta dil loo geystay in ka badan afar kun oo qof oo ay ciidamada...
Booliska dowlada Kenya oo gacanta ku dhigay Sadia Matani iyo faahfaahin laga bixiyey
Mjournal :-Guddoomiyaha degmada Kalifi ee dalka Kenya Magu Mutindika ayaa sheegay in Laamaha ammaanku ay Haweeney 44 jir ah lagu magacaabo, Saidia Matani ku qabteen Magaalada. Shakiga ayaa yimid markii haweeneydan ay diidday in la baaro. Mr. Mutindika ayaa sheegay in Haweeneydan...
CC Shakuur oo su’aal ka keenay jawaabtii Farmaajo ee Qalbi Dhagax
Mjournal :-Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ahaa Musharaxiintii Xilka Madaxweynaha kula tartantay Madaxweyne Farmaajo ayaa su’aal badan ka keenay jawaabtii uu ka bixiyay dhiibidii C/kariin Qalbi Dhagax. C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay inay is weydiinta tahay...
Al-shabaab oo weerar saldhig ciidamada Kenya ay ku lahaayeen gobolka Waqooyi Bari
Mjournal :-Madaxweynaha Somalia Max’ed C/llaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhiibistii C/kariin Qalbi-dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsanaa Jabhadda ONLF kaasoo sanadkii hore dowlada Somalia u gacan gelisay dowlada Itoobiya. Wareejinta Qalbi-dhagax ayaa noqotay...
Farmaajo oo ka hadlay arinta Qalbi-Dhagax
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay Kiiska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ay dowladda Soomaaliya u dhiibtay dowladda Itoobiya. Madaxweynaha oo la weydiiyay Su’aal ku aadan sababta lagu dhiibay Qalbi...